AUD / JPY na-aga n'ihu na-aga n'ihu, nwere ike ịlaghachi na ọkwa 82.44
£ 351 ọnwa Illedgwọ Monthly
£ 653 ọnwa Illedgwọ Quarterly
£ 956 ọnwa Illedgwọ Bi-Kwa Afọ
£ 250 Akaụntụ Pro ndụ Access
Nweta VIP Forex Signals Free Maka Otu Afọ, Naanị Mepee Akaụntụ na Etoro ma Mee Nkwụnye ego, Email support@learn2.trade na nseta ihuenyo nke ego na akaụntụ iji nweta ohere!
Onye na-ede akwụkwọ By Azeez Mustapha
Deeti ụbọchị January 21, 2021
Enweghị asịsa na AUD / JPY na-aga n'ihu na-aga n'ihu, nwere ike ịlaghachi na ọkwa 82.44
Ọkwa Nchịkwa Isi: 78.00, 80.00, 82.00
Ntọala Nkwado Isi: 58.00, 60.00, 62.00
AUD / JPY Ahịa Ogologo oge: Bullish
AUD / JPY na-aga n'ihu ugbu a. The ụzọ na-ebili n'elu larịị 79.00. Na Jenụwarị 8 uptrend, kandụl ahụ enwetara azụ nwalere ọkwa 78.6% Fibonacci retracement. Ntughari ngosi na-egosi na ụzọ ahụ ga-ebili ma gbanwee na ọkwa 1.272 Fibonacci. Nke ahụ bụ elu nke 82.44.
AUD / JPY - Chart Na-adị kwa ụbọchị
Chart egosi na-egosi:
MAbọchị SMA iri abụọ na otu na SMA ụbọchị iri ise na-agbada elu na-egosi ịrị elu. Umu uzo a ebiliwo n'ogo 21 nke oge ikwu ike nke 50. Nke a na-egosi na Yen nọ na mpaghara elu elu na elu nke etiti 60. Yen nwere ohere iji gaa n'ihu na-aga elu.
AUD / JPY edikpụrụ-oge Trend: Bullish
Na eserese 4-hour, ụzọ ahụ na-aga elu. Na Jenụwarị 8 uptrend; a retraced kandụl ahu anwale 61.8% Fibonacci retracement larịị. O nwere ike ịbụ na ụzọ abụọ ahụ ga-ebili na ọkwa 1.618 Fibonacci. Nke ahụ dị elu nke 82.19.
Chart AUD / JPY -4 Oge Awa
Ihe ngosi Chart nke oge 4 Readinggụ ihe
Di na nwunye AUD / JPY dị ugbu a karịa 80% nso nke stochastic kwa ụbọchị. Ọ na-egosi na ụzọ ahụ dị n'ike n'ike. Ahịa eruola mpaghara oke ahia nke ahịa ahụ. Ndị SMA na-agbago n’elu na-egosi elu.
General Outlook maka AUD / JPY
Ndị otu AUD / JPY na-azụ ahịa ugbu a na mpaghara achụrụ. Dị ka ngwá ọrụ Fibonacci si kwuo, ahịa ahụ ga-eru elu nke 1.272 ma ọ bụ 82.31 ma tụgharịa.
Note: Learn2.Trade abụghị onye ndụmọdụ gbasara ego. Mee nyocha gị tupu itinye ego gị na akụnụba ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa ma ọ bụ ihe omume ewepụtara. Anyị abụghị ọrụ maka nsonaazụ itinye ego gị
Onyinye-emeri Cryptocurrency trading n'elu ikpo okwu
14 Cryptoassets dị iji tinye ego na
FCA & Cysec chịkwara
Ngwaahịa itinye ego na - enweghị atụ. Enweghị nchebe ọ bụla nke EU.
N'ime 100 ngwaahịa ego dị iche iche
Tinye ego na $ 10
Withdrawalwepu otu ụbọchị ga-ekwe omume
Azụmahịa n'elu Crypto dị ka Bitcoin, Litecoin na Ethereum tinyere ndị ọzọ
Erolọ ọrụ Zero na enweghị ụgwọ ụlọ akụ na azụmahịa
Gburugburu elekere elekere na nkwado na asụsụ iri na anọ
$ 100 nkwụnye ego kacha nta,
Soro ndi ahia ozo!